Pkg2appimage: Etu esi ewu faịlụ nke anyị AppImage? | Site na Linux
Pkg2appimage: Etu esi ewu faịlụ nke anyị AppImage?
Ọ na-abụkarị nkịtị, n'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ nke Sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emeghe, Akpan na GNU / Linux, na ọtụtụ ụdị ya n'ụdị Ihe nkesa (Distros), na-achọ ịwụnye otu ngwa mpụga, na enweghị ike ime ya, ebe ọ bụ na ọ dakọghị na nke anyị GNU / Linux Distro ma ọ bụ nọmba ya.
N'oge na-adịbeghị anya, nke a mere m, mgbe m chọrọ inyere onye otu ibe m aka ịwụnye ngwa ahụ Achọpụta ngwugwu 7.xx. gbasara ya Debian Distro 10, na-eji nke m Distro MX Linux 19.1. Na mgbe nyochachara ma nwalee, wụnye nchịkọta ndị ọzọ site na ndị ọzọ Distros (Ubuntu / Debian) ma na-arụ «Oge ochie»Wedata) hà na n'ọbá akwụkwọ redirects iji agbanwe $ LD_LIBRARY_PATH na ịmepụta njikọ ihe atụ, ihe niile abaghị uru, ruo mgbe m jiri ngwá ọrụ ahụ Ihe omume Pkg2.
Ọ dị mma, nke mbụ, gosipụta na faịlụ faịlụ ma ọ bụ teknụzụ AppImage bụ nke ihe a maara dị ka "Ngwa niile maka GNU / Linux". N'etiti formats gụnyere n'okpuru aha a, na mgbakwunye na AppImage, ha na-ahụ onwe ha Flatpak y snap. Agbanyeghị, ụfọdụ na-agụnye teknụzụ ngwugwu a maara dị ka Ngwa Orbital.
1 Kedu ihe bụ AppImage?
2 Pkg2appimage: Ngwá ọrụ iji mepụta ngwa AppImage
2.1 Iji Pkg2appimage
2.1.1 A.- Nzọụkwụ 1
2.1.2 B.- Nzọụkwụ 2
2.1.3 C.- Nzọụkwụ 3
2.1.4 D.- Nzọụkwụ 4
2.1.5 E.- Nzọụkwụ 5
Kedu ihe bụ AppImage?
N'ihi ya, AppImage bụ usoro iji kesaa obere sọftụwia na GNU / Linux ọ dịghị mkpa maka ikikere superuser iji wụnye ngwa ahụ. N'ụzọ dị otú a, ikwe na ikwado ihe nkesa software ọnụọgụ abụọ, nke na-adabereghị na GNU / Linux Distros. Nke bara ezigbo uru, ma maka ndị mmepe na ndị ọrụ.
"Budata ngwa, mee ka ọ rụọ ọrụ, ma gbaa ọsọ. Ọ dịghị mkpa ịwụnye ya. A naghị agbanwe ọba akwụkwọ na sistemụ sistemụ. Ọ nwekwara ike na-agba ọsọ na sandbox dị ka Firejail. Kesaa ngwa Linux desktọọpụ gị na usoro AppImage ma merie ndị ọrụ na-ekesa nkesa Linux niile. Mkpọ otu ugboro ma gbaa ọsọ ebe niile. Na-erute ndị ọrụ na oke nkesa desktọọpụ niile". https://appimage.org/
AppImage nwere ngwa ngwa "AppImageHub"
Pkg2appimage: Ngwá ọrụ iji mepụta ngwa AppImage
Dị ka ndị mmepe nke Teknụzụ AppImage na ya ukara website, ọ na-eme ukara ojiji nke ngwá ọrụ Ngwa AppImageKit iwu ngwa site na ọkọ n'okpuru usoro .Ihe omume. Ka ọ dị ugbu a, iwu (tọghata) ngwa AppImage sitere na ndị ọzọ emegoro n'okpuru usoro ndị ọzọ, jiri ngwa ọrụ ahụ Ihe omume Pkg2.
N'okwu m, ebe m chọrọ iwu a .Ihe omume nke ngwa Achọpụta ngwugwu 7.xx, M malitere iji usoro a kọwara na Ebe nchekwa GitHub nke Konradmb na Pkg2appimage na Packet Tracer.
Ojiji nke Ihe omume Pkg2
Dị ka onye edemede ahụ kwuru, agara m site na ịme usoro ndị a na iwu iwu ha:
A.- Nzọụkwụ 1
Mmepụta oyiri .yml faịlụ repository maka Packet Tracer
git mmepụta oyiri https://github.com/konradmb/PacketTracer-AppImage.git
cd Ngwugwu-AppImage /
B.- Nzọụkwụ 2
Budata ngwa ọrụ Pkg2appimage ma mee ka ọ rụọ ọrụ
wget https://github.com/AppImage/pkg2appimage/raw/master/pkg2appimage chmod + x pkg2appimage
C.- Nzọụkwụ 3
Melite ọdịnaya nke .yml faịlụ na ụzọ nbudata faịlụ ọhụrụ Ihe ngwugwudị ka ụzọ nbudata ugbu a enweghị faịlụ ahụ. N'ihi nke a, a pụrụ iji nchịkọta akụkọ nano console dị ka ndị a:
Mgbe ahụ ọ ga- ikwu (gbanyụọ ya na #) akara mgbe ochie ma tinye ezi, otu akara dị elu dị ka ndị a:
D.- Nzọụkwụ 4
Mee ngwugwu .Ihe omume na Ihe ngwugwu gosiri na .yml faịlụ
E.- Nzọụkwụ 5
Gbaa ngwugwu .Ihe omume na Ihe ngwugwu wuru. Otu ihe ahụ, ọ bụrụ na e meela ihe niile n'ụzọ ziri ezi, ga-adị n'ụzọ:
"/ ụlọ / $ USER / PacketTracer-AppImage / out /"
Ma mgbe emechara ya, ị ga-enwe ike iji anya nke uche gị ọhụrụ AppImage ngwa enweghị nsogbu ọ bụla, dị ka egosiri n'okpuru:
MX Linux 19.1 Team (Dabere na Debian 10 - Buster)
GNU / Linux Debian 10 Team (Buster)
Mgbe nkuzi a na ụfọdụ nnwale na mmejọ, enwere m olileanya na ọtụtụ nwere ike iru ngwa nke aka ha .Ihe omume eji Ihe omume Pkg2.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Pkg2appimage», ngwa oru eji mepụta echichi faịlụ nke ngwa n'okpuru usoro AppImage eji faịlụ ọnụọgụ abụọ (tar.gz, .deb ma ọ bụ .ppa) dị na a nkọwa faịlụ .yml iji nweta ntughari; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Pkg2appimage: Etu esi ewu faịlụ nke anyị AppImage?
Ezigbo mma post! Obi dị m ụtọ ịhụ na obodo Linux na-asụ Spanish nwere mmasị na usoro AppImage. Ọ ga-amasị m inye obere onyinye. Ngwaọrụ pkg2appimage adịgo oge nwa oge ma nwekwa ụfọdụ adịghị ike. Ihe kachasị ama bụ na enweghị ike iji nchịkọta esi na ya kesaa ya na glibc dị ala karịa sistemụ eji mepụta ya. Nke a bụ ihe kpatara eji arụ ọrụ ọzọ dị ike karị.
appimage-ewu (https://appimage-builder.readthedocs.io) dịka pkg2appimage jiri yml file maka nhazi. N'ime akwụkwọ ị nwere ike ịchọta nkuzi banyere otu esi eji ya. Ma n'ezie ị nwere ike ịjụ mgbe niile, m ga-eji obi ụtọ mee ka ajụjụ ọ bụla doo anya.
Alexis Lopez Zubieta ihe oyiyi
Onye ntinye aka na ntinye aka
Ekele Alexis! Ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu gị dị mma banyere isiokwu ahụ. Anyị na-atụ anya ide edemede n'oge na-adịghị anya banyere ngwa ọrụ ị na-atụ aro ka ọ bụrụ nke ọzọ dị ugbu a na pkg2appimage. Maka ndị ọzọ, Ọganiihu, ahụike na ọtụtụ ngọzi nye gị, yana onye ọ bụla nọ na ngwa AppImage.
Viejuber YT dijo
Ndị enyi m na-agwa gị na m nwere ahụmịhe na-adịghị mma na usoro .appimage, ana m agwa gị, ụbọchị ole na ole gara aga, m wụnye balena etcher (na KDE Neon m) na ọ dị nwute m ugbu a na-abịa naanị n'ụdị a na ụdị Linux. M wụnyere ya, jiri ya ma hichapụ ya, nke ahụ bụ ebe nsogbu ahụ malitere, M mepụtara folda n'ụlọ akpọrọ Ngwa na ọbụlagodi na ihichapụ ya, a na-eweghachi ya mgbe ọ bụla regharịa. Ọ na-ewe ihe karịrị otu ụbọchị ịchọta faịlụ ndị zoro ezo nke emepụtara na-enweghị ikike gị mgbe ị na-agba otu. appimage. Maka m, usoro a dị ka nje karịa ụdị mmemme ọzọ. Ọ dịghị egwu egwu m ga-etinye ihe ọzọ na usoro a.
Zaghachi na Viejuber YT
Ekele Viejuber YT! Ọ bụ ihe ihere. M arụnyere / uninstalled Balena na AppImage enweghị nsogbu, na ekweghị n'ezie na AppImage bụ ihe ọjọọ ụzọ ma ọ bụ a ọjọọ emejuputara atumatu. I kwesiri igbali karia ihu otu o si aga ...
Javi 42 dijo
Ekele m na post a. Anọ m na-arahụ ịnwa ime ka PacketTracer na-agba ọsọ na LMDE4 m (Debian 10)
Gbaso ntuziaka m nwere ihe ịga nke ọma maka PacketTracer 7.2.1 mana ọ na-akụda ma ọ bụrụ na m nwaa ya maka 7.3.0 yana otu nsogbu ahụ dabere na libjpeg.so.8 na ụfọdụ ndị ọzọ.
Ekele Javi42! Daalụ maka okwu gị, enwere m obi ụtọ na post ahụ baara gị uru.
Ọ ka na-echere iji nweta ya ka ọ rụọ ọrụ na Mepee na: Agbalịrị m ịmepụta dakọtara .desktop mana ọ nwetaghị arụmụka% f,% F ma ọ bụ% U nke ọma ka ọ mepee faịlụ ahụ agafela dị ka oke. Achieved nwetala ya?
Tọgharia: Etu ị gha esi degharịa anyị Debian / Ubuntu dabere na Distros?
Ultimaker Cura: ngwa dị mma iji kwadebe ụdị maka mbipụta 3D